प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए यस्तो गम्भीर आरोप — Imandarmedia.com
प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए यस्तो गम्भीर आरोप
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि प्रचण्डको इसारामा चल्न थालेको आरोप लगाएका छन् । देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छाले कृत्रिम अलोकतान्त्रिक बाटो समाते भन्दै बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । जनतामा जाने कुरालाई ‘कू’ भनेको भन्दै २०१७ सालको घटना लोकतान्त्रिक भए नभएको सम्झन उनले प्रश्नसमेत गरे ।
नेपाली कांग्रेसले कू भन्ने बिर्सिसकेछ । म शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्न चाहन्छु । माघ १९ के थियो ? लोकतान्त्रिक थियो । आश्विन १८ गतेको घटना कू थियो कि थिएन ? त्यतिबेला उहाँले कू भन्न सक्नुभएन् ,” उनले भने “अहिले संवैधानिक रुपमा जनताकोमा जाँदा कू भनेको छ, प्रतिगमन भनेको छ ।
उहाँले प्रचण्डको भाषा पनि सापट लिएर, सापटी मात्रै होइन की प्रचण्डको भाषाशैलीलाई आफ्नै बनाइसक्नुभयो । दया लाग्छ प्रजातान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टी प्रचण्डपन्थी भएको देख्दा अचम्म लाग्छ ।”
‘नेपाली कांग्रेस प्रचण्डपथमा हिँडेपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरु नै नाथुराम गोड्से खोजी गर्ने, भेटिएन भने आँफै हुने तहमा पुगेको भनेको प्रचण्डपथ नै अंगालेको हो,’ ओलीले भने, ‘त्यसै त अराजनीतिक अस्थिरताको प्रतिनिधि, देश कता जान्छ मतलव छैन, त्यो कुरामा पुग्नु भनेको प्रचण्डपथ नै अँगालेको हो।’ ओलीले प्रचण्डपथको चर्चा अदालतमा समेत हुन थालेको र त्यसबारे अदालत मौन बस्नु आश्चर्यजनक रहेको गुनासो गरे।
‘नेपाली कांग्रेसले अंगालेपछि प्रचण्डपथ यति व्याप्त भइसक्यो, त्यसलाई कांग्रेसले मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएपछि अहिले प्रचण्डपथ सुप्रिम कोर्टमा पनि चर्चा हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘फ्रान्स र बेलायतका राजाहरु किन काटिन्थे भन्दा अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेजस्तै गर्दा रहेछन् र पो काटिँदा रहेछन्। अथवा अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि काट्नुपर्छ ?’
सो कुरा सर्वोच्च अदालतमै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका एकजना कार्यकर्ताले भनेको उनको भनाइ छ। ओलीले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले नाथुराम गोड्से आँफै बन्छु भनेको र फ्रान्स र बेलायतमा किन काटिए भन्ने प्रसंग सर्वोच्च अदालतमा आएको र हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने वक्तव्य दिँदा न्यायाधीशबाट रोक्ने काम नगरेको भनी आश्चर्य व्यक्त गरे।
उनले अभिव्यक्ति दिँदा अदालतबाट रोक्ने काम समेत नगरिएको भनी आक्रोश व्यक्त गरे। न्यायमुर्तीहरुले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने अधिवक्तालाई रोक्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘यस्तो हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने काम अदालतमा गर्नु हुन्न, तपाईंको मन्तव्य सम्हालेर राख्नुस् भनेर न्यायमुर्तीहरुले भन्नुपर्ने होइन ?’ उनले भने। कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले केही हप्ता पहिले बागमती प्रदेशमा आफू नाथुराम गोड्से बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। चर्को दबाबपछि उनले आत्मालोचना गर्दै उक्त भनाइ फिर्ता लिएका थिए।